Mogadishu Journal » Arsenal ayaa Odegaard kala soo wareegtay Real Madrid heshiis joogto ah
Arsenal ayaa Odegaard kala soo wareegtay Real Madrid heshiis joogto ah
Arsenal ayaa dhameystirtay saxiixa Martin Odegaard oo ay kala soo wareegtay Real Madrid heshiis joogto ah oo lagu sheegay 30 milyan oo ginni (€ 35.2m).
Ciyaaryahanka heerka caalami ee reer Norway, oo amaah ku qaatay qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore Emirates Stadium, ayaa loo maleynayaa inuu heshiis afar sanno ah la gaaray kooxda ka dhisan Premier League.
Odegaard ayaa ku soo laabtay kooxda waalidka ah ee Madrid laakiin kama mid ahayn ciyaartoydoodii kulanka u ahaa kulankii ay 4-1 kaga badiyeen Deportivo Alaves isbuuca furitaanka xilli ciyaareedka cusub ee LaLiga.
Isagoo ku koobnaa kaliya sideed kulan oo uu u saftay Los Blancos tan iyo markii uu ku soo biiray 2015, inta badan waqtigaas wuxuu ku qaatay amaah, ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa hadda si joogto ah uga tagay caasimadda Spain.
Mikel Arteta ayaa ka hadlay saxiixiisa cusub: “Wuu naga dhigay mid wanaagsan, waxaan u baahanahay ikhtiyaarro dheeri ah, beddello dheeri ah, hal -abuur iyo ciyaartoy u noqon kara tusaalayaal kooxdan kubbadda cagta.
“Waan ku faraxsanahay in kooxdu ay samaysay dadaal waxaan halkan ku haynaa Martin”.
Odegaard ayaa 20 kulan u saftay tartamada oo dhan kooxda Arsenal ka dib markii uu amaah ugu soo biiray dhamaadkii suuqii Janaayo, 14 ka mid ah kulamadaas wuxuu ka yimid Premier League.
Wuxuu dhaliyay hal gool wuxuuna caawiyay laba caawin, halka 20 fursadood ee uu abuuray ay ahaayeen kuwa ugu badan ciyaaryahan kasta oo Arsenal ah intii uu amaahda ku joogay, wuxuuna ka badan yahay saddex gool oo uu ka badan yahay Emile Smith Rowe.
Badeecada Stromsgodset ayaa sidoo kale aad ugu sarreysa darajooyinkii la dhammaystiray, goolashiisii ​​13aad ee horyaalka waxaa ka faa'iidaystay kaliya Nicolas Pepe (14), Thomas Partey (15) iyo Bukayo Saka (18).
Odegaard ayaa noqonaya saxiixii saddexaad ee Arsenal ee daaqadda ka dib markii ay yimaadeen Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga iyo Ben White.
Kooxda Arteta waxaa 2-0 ku garaacday Brentford oo dhawaan dalacday kulankoodii ugu horeeyay ee ololahan.
22 darbo oo ay iska diiwaan geliyeen iyaga oo aan wax gool ah ka dhalin Bees ayaa ahaa kuwa ugu badan iyaga oo aan shabaqa soo taaban kulan horyaalka ah tan ilaa December 2017 oo ay la ciyaareen West Ham (sidoo kale 22).
Maraykanka oo ciidamo hor leh geeyey garoonka dayuuradaha Kabul (Sababta)